इन्टरनेट कानूनी सल्लाह
निःशुल्क परामर्श वकील — एक मिथक छैन. हाम्रो साइट मा, तपाईं प्राप्त गर्न सक्छन्, पूर्ण निःशुल्क विशेषज्ञ सल्लाह मा कुनै पनि कानूनी प्रश्न छ । किनभने मुद्दाहरू उठ्छन्, तिनीहरूले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ, तुरुन्तै अक्सर ल्याउन बिना मामला अदालत छ । कानून को एक सेट छ एकदम जटिल नियमहरू र विनियम, जो मदत बिना एक वकील यो असम्भव छ बुझ्न । निःशुल्क कानुनी सल्लाह छ बस एक छडी छ, जो लगभग सधैं उपलब्ध छ, विशेष गरी अनलाइन च्याट संग वकील. तपाईं मुक्त हुन सहयोग गर्न तयार कानूनी पेशेवर संग अभ्यास को वर्ष अनुभव छ । तिनीहरूले मदत गर्नेछ ह्यान्डल गर्न गाह्रो छ, र कहिले काँही बस जब तपाईं अवैध लिपटे ।
तपाईं प्रदान निःशुल्क कानुनी सल्लाह:
व्यक्ति र टी
कानूनी सल्लाह छ पहिलो चरण समाधान गर्न प्रत्यक्ष संवाद मार्फत समस्या संग वकील. मा परामर्श, तपाईं प्रदान गर्न गोप्य जानकारी मा एक विशेषज्ञ गर्न मा व्यवस्था छ । एक वकील एक कर्तव्य प्रदर्शन गर्न यो, सोध्न आवश्यक आधारित प्रश्नहरू दिइएको अवस्था, एक निष्कर्षमा आकर्षित र तपाईं दिन को एक संक्षिप्त विवरण एक कानूनी बिन्दुबाट दृश्य को आफ्नो समस्या छ । धेरै गलत हो भन्ने एक टाढाको मौखिक संवाद (फोन कल, च्याट फोरम, अनलाइन परामर्श) को समस्या समाधान गर्न छ । यो छ छैन यति छ । कानूनी समस्या पछि मौखिक परामर्श मात्र प्राप्त प्रतिरूपण बन्न अधिक गठन नजर हुन्छ र एक वकील बारेमा सम्भव समाधान गर्न, यो खतरा को एक लागि सम्भव छ । सबै भन्दा साधारण छ परामर्श गर्न एक वकील मा फोन रूपमा सबैभन्दा सुलभ, सबैका लागि आधुनिक संसारमा एक तरिका उल्लेख गर्न सीधा एक विशेषज्ञ छ । एक टेलिफोन कल मा, सामान्यतया हल गर्न सकिन्छ छोटो प्रश्न, अद्यावधिक, रही मदत र सल्लाह मा परिवर्तन मा कानून छ । पनि, लोकप्रिय र अनलाइन परामर्श, सञ्चालन स्काइप मार्फत, अनलाइन च्याट, फोरम, ई-मेल.
यस प्रकारको को परामर्श को एक छ
सबैभन्दा लामो र जटिल छ । समयमा परामर्श वकील गर्नुपर्छ, प्रश्न जटिलता आधारित र प्रकृति को आफ्नो अवस्था छ । जब संवाद मार्फत च्याट वा मंच गर्न सक्षम छैन बाहिर बनाउन आवश्यक कागजातहरू, र स्काइप र इमेल गर्न सक्छन्. हामी तपाईं दिन चाहनुहुन्छ भनेर बुझ्न व्यवस्था छ एक विशाल कागजात । यो कारोबार समावेश कागजातहरू कि तपाईं हात मा छ वा दाबी गर्न सक्छन् मा निश्चित अङ्गहरू वा शरीर । प्लस कागजातहरू कि तपाईं को लागि तयार गर्न सक्छन् आफ्नो समस्या को समाधान छ.
यस यातायात दोस्रो गर्न सकिँदैन बिना पहिलो र यो महत्त्वपूर्ण छ ।